Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara anụmanụ Miocene | Network Meteorology
El Miocene bụ otu n'ime oge abụọ kpụrụ Oge Neogene n'etiti Oge Cenozoic. Nke a bụ oge mgbe nnukwu mgbanwe gbanwere na ọnọdụ ihu igwe, ndu na ndụ. Ihu igwe ahụ nwere mgbanwe dịgasị iche iche na ọnọdụ okpomọkụ na nke a kpatara mmepe nke ọma nke ụdị ụfọdụ nke anụmanụ na osisi nwere ike ịgbasa ma gbasaa na mbara ala. Na Miocene fauna ihe ejiri mara ya bu inwe anumanu ndi ghabighari na otu ihe ndi ozo na ndi ozo puru iche ebe nile.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara niile, evolushọn na ụdị anumanu nke Miocene.
N'oge a nile enwere mgbanwe ụfọdụ na okpomoku ụwa. Na mbido nke Miocene, anyị hụrụ obere okpomoku nke jiri nwayọ nwayọ nwayọ wee gafee oge. Ihe dị ka ọkara oge, oge okpomọkụ dị mma ruru ọtụtụ osisi na ụdị anụmanụ iji zụlite nke ọma.
Okwu banyere mammals, nnụnụ na anụ na-akpụ akpụ na amphibians bụ ndị nwere ike ịgbasa ọtụtụ oge n'oge a. A maara ya site na ihe ndekọ dị mkpa nke ihe ochie na e nwere ụdị mmadụ biri na mbara ụwa anyị n'oge ahụ.
Miocene bụ oge nke were ihe dị ka oge ihe dịka nde 8 gara aga wee bido ihe dịka nde 23 gara aga. Ọrụ niile a na-arụ n’oge ahụ siri ezigbo ike, na-eme ka ugwu ugwu dị iche iche too. N'ebe ụfọdụ kpọmkwem na mbara ala uto a nwere nsonazụ dị mkpa. Otu n'ime ha bụ nsogbu nnu na Mesaịa.
N'ihi mgbanwe ndị a na-agbanwe agbanwe na ọnọdụ okpomọkụ kachasị mma n'ụwa niile otutu akụkụ nke mammals, nnụnụ, na-akpụ akpụ na amphibian nwere ike iche. Enwere ihe edeturu ala nke otutu na anumanu di iche iche di n'oge a. Fosili niile dị nha na predilections. A maara na anụmanụ ndị na-enye ara bụ otu ìgwè anụmanụ ndị nwetara mmepe na ntụgharị dị ukwuu.
Tupu ịga n'ihu nyochaa anụmanụ nke Miocene, anyị kwesịrị iburu osisi ahụ n'uche. Nke a bụ n'ihi na akụkụ buru ibu nke ụmụ anụmanụ nọ na Miocene bụ ahịhịa ahịhịa. A na-echekwa ọtụtụ akụkụ nke anụmanụ na osisi ndị a taa, na-eme akụkụ dị mkpa nke nnukwu ụdị dị iche iche nke usoro okike.
N’oge Miocene ahụrụ ya oke onu ogugu oke ohia na oke ohia. Nke a bụ n'ihi mbelata ọnọdụ okpomọkụ nke emere na mbido oge ahụ. Otu n’ime ihe kpatara eji belata oghere osisi bụ mbelata mmiri ozuzo n’ụwa niile. N'ihi ya, ọtụtụ ụdị ahịhịa ga-emegharị ka ọnọdụ mmiri ozuzo ndị a dị ala.
N'ihi nke a, ahịhịa na ahịhịa ndị pere mpe bụ ndị malitere ịchị ụwa. Ndị a bụ osisi nwere ikike dị ukwuu iji nagide ogologo oge ọkọchị na ntu oyi. N'oge a angiosperms toro. Ha bụ osisi ndị ahụ nwere nkpuru kpuchie.
Herbaceous bụ osisi ndị ahụ osisi ya abụghị osisi. Ha na-agbanwe agbanwe ị ga na-acha akwụkwọ ndụ na agba na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ epupụta. A na-ahụ ha n'ìgwè dị iche iche ma na-eguzogide mmiri ozuzo na okpomọkụ dị ala. N'aka nke ọzọ, anyị na-ahụ isi obodo. Chaparral bụ ụdị biome nke otu ụdị ahịhịa a maara dị ka chaparros na-amalite. Osisi ndị a dị mkpirikpi bụ obere osisi osisi nwere ike ịlanarị na ọnọdụ gburugburu ebe obibi. Cacti na bushes mekwara ka ha daa.
N'oge a, enweghi mgbagha na otu anụmanụ nke anụmanụ Miocene nke mepụtara kacha bụ anụmanụ ndị na-enye ara. Ma umu anumanu abuo dika ndi otu na - achikota, rue nnukwu mammals dika ufodu mmiri. Otu nnụnụ ahụ nwetakwara mmụba dị elu n'ọtụtụ na ụba. Ihe a nile ka amara site na nkpuru-osisi nke ihe ịchọpụta n’elu ụwa nile.
Anụ ndị na-ahụ maka ụwa nke bara ụba n'oge anụmanụ Miocene bụ ihe ndị a:
Gomphotherium (kpochapụrụ): ọ bụ nnukwu anụmanụ nke nwere ebe obibi na mpaghara Eurasia. O ruru mita 3 n'ogo ma otu n'ime njirimara ya bụ na ha nwere ụzọ abụọ nke ogologo na-eguzogide ọgwụ.
Amphicyon: bu udiri ozo no na emebila taa. Ọdịdị ya bụ nke anụmanụ dị n’etiti nkịta na anụ ọhịa bea. Site na aru zuru oke, o nwere ukwu na ano na odu ogologo. Ha nwere ike iru otu mita n’ogologo na mita abụọ n’ogologo ma dịrị ihe karịrị kilogram 4.
merychippus: e nwere taa anụmanụ a nwuchaala. Ọ bụ obere anụmanụ ma jiri mkpịsị aka ya na akụkụ nke ọ bụla mara ya. Ọkachamara ahụ na-agagharị n'ọhịa na-achịkọta ìgwè n'ìgwè iji kpaa nri. N'ile anya, ọ dị ka ịnyịnya na ịnyịnya ọhịa nke taa.
Astrapotherium: anumanu anwuola taa. Ọ bụ otu n'ime anụmanụ ndị kasị ukwuu, na-eri ihe ruru otu tọn ma tụọ mita atọ n'ogologo. Otu n'ime njirimara ya bụ ezé nke gosipụtara na ọ na-ahịhịa ahịhịa. Ha nwere ike ịgafe site na mmiri na-adịghị ala na ala akọrọ n'ihi nnukwu aka na ụkwụ.
Megapedetese: ụdị ọzọ nke bụ maka usoro òké. Nha ya pere mpe ọ bụ ezie na ọ ruru kilo 3. Ahụ ya yiri nke oke bekee ma ọ nwere nnukwu ike ma mepụta akụkụ aka azụ. N'aka nke ọzọ, aka ya dị mkpụmkpụ dị mkpụmkpụ.
Dịka anyị kwuburu, ụmụ anụmanụ na mmiri na-agbasakwa ntakịrị n'oge a. N'ime otu nnụnụ, e nwere nnukwu ihe atụ na ndị ọzọ bụ ndị zụlitere mmụọ mmụba nke ndụ ha ntakịrị. Banyere anụ na-akpụ akpụ na amphibians, anụ ndị na-eri anụ karịrị ha.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere anụmanụ nke Miocene.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Miocene fauna